Nhanganyaya kune basa remota kutyaira rekodhi
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Nhanganyaya kune basa remota kutyaira rekodhi
Kune akawanda mabasa eiri kutyaira data rekodhi:
Chekutanga pane zvese, tsaona inogona kupora.
Chechipiri, kuneta kutyaira kunogona kudzivirirwa. Rekodhi rekutyaira rinogona kurekodha mutyairi wekutyaira nguva. Mamwe marekodhi ane chiyeuchidzo basa. Kana iwe wakaneta, iwe unogona kuyeuchidza muridzi kuti arege kuneta.
Chechitatu ndechekutamba chikamu mukuchengetedza chengetedzo. Rekodhira rekodhi inoongorora mamiriro emota chero nguva. Yakasanganiswa neremote network control, kana zvinhu zviri mumota zvabiwa kana mota ikarasika, system mirairo inogona kushandiswa kungoitora mifananidzo mukati nekunze kwemota kuti ipe ratidziro yekugadzirisa nyaya yacho.
Kuona izvi, shamwari zhinji dzichabvunza, kuti yekumisikidza ichi rekodhi yekuchaira sei? Zvakanaka, ngatitaurei nezve maitiro ekuisa rekodhi yekuchaira.
Kutanga sarudza nzvimbo yekumisikidza rekodhi. Rekodhi yekuchaira inowanzoiswa mukati memotokari, izvo zvinonyanya kubatsira pakunyora mamiriro ekutyaira.
Kechipiri, isa memori kadhi mune kadhi slot yeadhiraina data rekodhi, uye isa simba rekuchaira rekodhi kunzvimbo yakakodzera. Iye zvino mazhinji marekodhi edu akajairika ekurekodha anogona kuiswa pagirazi rekuona kumashure kwemotokari.
Tevere, iwe unofanirwa kuronga nzira nzira yedash cam.
Kutyaira rekodhi wiring: denga â † 'A â †' co-mutyairi bhaisikopo â † 'yakareruka sokisi. Kana mutsetse wacho wakareba zvakakwana, unogona zvakare kufamba kubva pasi pechikwiriso chemupfuuri kuenda kunongedzera mudzanga.
Chekupedzisira, isa simba plug yekuchaira rekodhi mune iyo fodya yakareruka yeChinese mota, batidza iratidziro yedu yekutyaira rekodhi, seta iyo nguva, rekodhi, uye chengetedza tekinoroji yekuvandudza ruzivo, uye nzvimbo yekumisikidza yagadzirira. Zvino, varidzi uye shamwari vanogona kusarudza kutyaira kunze kwemaviri laps kuti vaedze uye voongorora kana rekodhi inogona kubata basa zvakajairika.
Kana shamwari dzako dzichifunga kuti hadzina simba rekugona uye vanotya kuti kumisikidzwa kwavo kuchakuvadza mota, unogona kusarudza chitoro che4s chekugadzirisa mota, kana chitoro chekugadzirisa mota chavanoziva. Iwe unogona zvakare kuenda kune rekodhi yekuchaira kana iwe ukatenga kubva kwavari Kana uchitya rekhoda, unoiisa iyo zvakananga Sevha nguva nedambudziko.
Yapfuura:Shanduko dzekare dzekufamba kwemotokari
Tevere:Ndeapi mamiriro enzvimbo anogona kuratidzwa neprojekita?